Nagarik Shukrabar - ‘पुस्तक लेख्नु आविष्कार हो, निरन्तरको खोजी हो’
बुधबार, ०७ चैत २०७४, ०९ : १३
‘पुस्तक लेख्नु आविष्कार हो, निरन्तरको खोजी हो’
बिहिबार, २७ पुष २०७४, ०२ : ३९ | शुक्रवार
हिमाल पत्रिकाका पूर्व सम्पादक एवं व्यंग्यकार तथा अनुवादक वसन्त थापा कुनै बेलाका चर्चित स्तम्भकार हुन् । थुप्रै पुस्तक अनुवाद गरिसकेका थापाको ‘ऋतुविचार’ भन्ने पुस्तक प्रकाशित छ ।
तपाईंले अहिले पढ्दै गर्नुभएको पुस्तक ?
कामको व्यस्तताले गर्दा पहिलेको तुलनामा अहिले म पढाइलाई समय अलि कम दिने गरेको छु । कार्य व्यस्तताको बाबजुद अहिले पनि म एक साथ तीनवटा पुस्तक पढ्दै छु । ती पुस्तकमा कवि विप्लव प्रतीकको ‘अविजित’, रवीन्द्र कार्कीको ‘बोर्डर’ र झुम्पा लाहिरीको ‘लो ल्यान्ड’ भन्ने पुस्तक रहेका छन् । प्रतीक गद्य कवि हुनाले उनको लेखनशैली गद्यमा छ, विषयवस्तु धेरैै रमाइलो छ । त्यस्तै रवीन्द्र आफू पूर्वको भएको हुनाले बेग्लै किसिमको भाषा छ । दुवैले ४०/४५ वर्षअघिको घटनाका सन्दर्भमा लेखेका छन् । सबै पाठकलाई जस्तै मलाई पनि कुनै लेखकको एउटा पुस्तक राम्रो लाग्यो भने उसका अरू पुस्तक पढ्न मन लाग्ने भएजस्तै भएको हो, झुम्पा लाहिरीको ‘लो ल्यान्ड’ । त्यो पुस्तक पढ्नुको कारण भने केही वर्ष पहिले उनको ‘दि नेमसेक’ भन्ने पुस्तक पढेको थिएँ, त्यसकै प्रभावले यो पुस्तक पढेको हुँ । त्यो मलाई निकै राम्रो लागेको थियो ।
तपार्इंको जीवन परिवर्तन गरिदिएको कुनै पुस्तक ?
कुनै पनि पुस्तक पढेर त्यसको ज्ञानले हिजोको आजै (थोरै समयमा) जीवनमा देखिने गरी फरक पार्दैन । तर व्यक्तिको विचारधारा र व्यक्तित्व निर्माणमा भने परिवर्तन हुन्छ । मलाई प्रभाव पारेका पुस्तकमा लियोन उरिसको ‘एक्जोड्स’ हो । यो पुस्तक इजरायलको बारेमा लेखिएको छ । त्यस्तै एलोम्स ह्यालीको ‘दि रुट्स’, जिओफ्री आर्चरको ‘केन एन्ड आवेल’ र डोमिनिक ल्यापिएरेको ‘ओ जेरुसेलम’ आदि । यस्ता पुस्तकले मेरो सोच्ने तरिकालाई नै परिवर्तन गरिदिएका छन् ।
तपार्इंको लेखनीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने लेखक वा पुस्तक ?
म लेखनमा जहिले पनि मौलिकता हुनुपर्छ भन्ने दृढ मान्यता राख्छु । लेखनमा अरूको प्रभाव पर्यो भने आफ्नो भन्नु के रह्यो र ? हामीले विभिन्न स्रोतबाट थोपाथोपा गरेर ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्छौँ । र, त्यो ज्ञानलाई अनुशरण गर्दै आफ्नो मौलिकतामा ढालेर लेख्नु सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । म कसैबाट पनि प्रभावित छैन ।
तपाईंलाई मन पर्ने लेखक ?
ब्रिटिस लेखक भिएस नयपाल मलाई खुब मनपर्ने लेखक हुन् । उनी नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् । उनले ‘ग्राहमग्रीन’ भन्ने पुस्तक निकालेका छन् । त्यस्तै हिन्दीमा निर्मल बर्मा, मोहन राकेश, नेपालीमा शंकर लामिछाने र धु्रवचन्द्र गौतम आदि लेखक मलाई धेरै मन पर्ने मध्येमा अगाडि आउँछन् ।
सबैभन्दा कम चासोमा परेको महत्वपूर्ण पुस्तकको नाम लिनु पर्यो भने कुन लिनुहुन्छ ?
पुस्तक भनेको सागर हो, पढेर साध्य हुँदैन । उपन्यास उठाएपछि सकभर सिध्याउँ भन्ने हुन्छ । समय अभावका कारण पढ्न मन लाग्दालाग्दै पनि पढ्न नपाएका थुप्रै पुस्तक छन् । नामै लिनुपर्दा इन्द्रबहादुर राईको ‘आज रमिता छ’ भन्ने पुस्तकलाई साहित्यकार मञ्जुश्री थापाले अंग्रेजीमा अनुवाद गरेकी छन् । त्यो पढ्न मन छ तर साथमा भएर पनि पढ्न पाएको छैन ।
तपार्इंलाई मज्जाले रुवाएको कुनै पुस्तक ?
मन पग्लिने खालका पुस्तक पढ्दै गर्दा नरुने को नै होला र ? त्यसको अपवाद म पनि हुने कुरै भएन । रोएको छु, भावनामा बगेर होला धेरै पुस्तक पढ्दा रोएको छु । टेकबहादुर पन्थीको ‘ममताको चिता’ पढ्दा म धेरै रोएँ । त्यस्तै इन्द्रबहादुर राईको ‘जयमाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी’ पढ्दा पनि त्यसरी नै रोइयो । यो पुस्तकमा बर्माबाट शरणार्थी बन्न पुगेकाको कथा व्यथामा प्रमुख पात्र जयमाया आफू मात्र लिखापानी पुग्छे । बाटामा सबै परिवारका सदस्य गुमाउँछे । बडो दर्दनाक छ यो पुस्तक ।
तपाईंलाई मज्जाले हँसाउने कुनै पुस्तक ?
पछिल्लो समय हँसाउने पुस्तक पढेको छैन तर पहिलेपहिले धेरै पढ्थेँ, त्यसमा पनि हिन्दीका पुस्तक धेरै पढियो । त्यस्तै हरिशंकर परसाईंका पुस्तक र शरद जोशीका पुस्तक पढ्दा धेरै हाँसियो ।
तपाईंले अन्त्यसम्म पढ्न नसक्नु भएका पुस्तक ?
त्यस्ता पुस्तक त धेरै छन् । नाम भन्न मिल्दैन । ती पुस्तक आधा जति पढेर थन्काइएका छन् । कसैको भाषा नमिल्दो लाग्छ, कसैको शब्द छनोट मन पर्दैन । भाषाले नसमातेपछि म त्यो पुस्तक हेर्दै हेर्दिनँ ।
पढ्न नपाएर लज्जित तुल्याएको कुनै पुस्तक छ ?
मैले आजसम्म कुनै पुस्तक पढ्न नपाएर लज्जित महसुस गरेको छैन ।
तपाईंले प्रायः उपहारमा दिइरहने कुनै पुस्तक ?
मैले आजभोलि खासै पुस्तक उपहारमा दिएको छैन किनभने आजकालका युवालाई पढ्न चासो नै छैन केको पुस्तक दिनु ? फेरि उपहारमा पुस्तक दिने चलन पनि त्यति छैन । तर मैले केही वर्ष पहिले एकजना साथीको विवाहमा ‘माओत्सेतुङ्ग संकलित रचना’ भन्ने पुस्तक उपहार दिएको थिएँ ।
तपाईं पुस्तक किन पढ्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न त तपाईं भात किन खानुहुन्छ भनेर सोधेजस्तै हो मेरा लागि । पुस्तक भनेको बौद्धिक खुराक हो । पुस्तक भनेको ज्ञान र मनोरञ्जनको स्रोत हो । त्यसकारण पढ्छु । म सानैदेखि पुस्तकसँगै हुर्किएँ । पुस्तक मेरा लागि जीवनको अभिन्न अंग हो, हिस्सा हो ।
कस्ता पुस्तक लेखिऊन् भन्ने लाग्छ ?
यस्तै लेखिनुपर्छ भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने जो पहिले लेखिएका छैनन्, जुन विषयवस्तु पहिले उठान गरिएको छैन त्यस्ता पुस्तक लेखिऊन् भन्ने लाग्छ । पुस्तक लेख्नु भनेको आविष्कार हो । निरन्तरको खोजी हो ।
कस्तो पुस्तक पढ्न सल्लाह दिनुहुन्छ ?
यस्तै पढ्नु, यही पढ्नु भनेर म भन्दिन । जुन पुस्तक पढ्दा आफ्नो मन रमाउँछ, प्रसन्न हुन्छ, पढौंपढौं लाग्छ त्यही पढ्ने हो । जुन पुस्तक पढ्दा पनि हामीलाई फाइदा भने अवश्य हुन्छ । पुस्तक पढाइले हाम्रो जीवनशैली नै रमाइलो बनाइदिनुका साथै ज्ञानको संसारलाई फराकिलो बनाइदिन्छ । उमेर अनुसार रुचि फरक हुनु स्वाभाविक हो । रुचि अनुसार पढ्ने गर्नुपर्छ ।
बन्दुक र कलमको संयोजनकारी
‘पुरस्कार मलाई दिनुस्, त्यो राशि बराबरको नगद तपाईंलाई नै भने’ भनेर पुरस्कार वितरकलाई पनि फकाइन्छ भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ ।'
‘घामकिरी’ फिटिक्कै मन परेन
कुनै लेखकको अघिल्लो पुस्तक राम्रो लागेर अर्काे पुस्तक पनि पढ्यो त्यो राम्रो हुँदैन । खालेद हासेनीको ‘एण्ड दि माउन्टेन इचोड’ राम्रो लागेन । उनका अघिल्ला कृतिहरु ‘दि काइट रर्नर’ र ‘अ थाउजेन्ड स्पेलेन्डडसन्स राम्रो लागेर पढेको थिएँ । अनि नयनराज पाण्डेको ‘घामकिरी’ फिटिक्कै मन परेन ।
‘कुनै पुस्तकले मलाई रुवाउन सकेको छैन’
मान्छेहरु सेन्टिमेन्टल गीत सुन्दा पनि रोइदिन्छन् । फिल्म हेर्दा पनि रुन्छन्, तर मलाई अहिलेसम्म कुनै पुस्तकले रुवाउन सकेको छैन ।